Tantine Louisette laharana faha-3 ao amin' ny kaominina Ampanotokana : Fanabeazana no vaindohan-draharaha.
ACTUALITE/ Developpement/ DEVELOPPEMENT/ Education/ ELECTION & PROPAGANDE/ Politique/ SOCIAL
Lynda ANDRIATSITONTA Ampanotokana, fanabeazana, Tantine Louisette	2 Comments juil 28, 2015
Ben’ny Tanana ny kaominina Ampanotokana teo aloha i Louisette Rasendraharivololona na Tantine Louisette. Mbola kandida ho fidiana amin’ny 31 jolay an’io kaominina io ihany koa izy. Laharana faha-03 mitondra ny marika famantarana ny antoko HVM ao amin’ny bileta tokana.
Maro ny tetika asa fampandrosoana tontosa nandritra ny fitantany, misy ihany koa anefa no tokony ho vitaina, hoy izy. Izany indrindra no antony nilatsahany fanindroany ho fidiana Ben’ny Tanana ny kaominina Ampanitokana Mahitsy.
Toerana faharoa malaza amin’ny tsenan’omby ity kaominina ity. Raha ny fivezivezen’ny omby ao aminy no jerena dia manana ny ampy ny kaominina. Mifanohitra amin’ izany anefa nambaran’ i Tantine Louisette. Zara raha mampidi-bola ny tsenan’omby noho ny fikorontanan’ny rafitra mampiodina ny tsena. manampy trotraka ihany koa ny foto-drafitra asa ka lasa baranahiny ny fidirana na ny fivoahan’ny omby ao. Anisany laharam-pamehana amin’ ity kandida noho izany ny fanamboarana foto-drafitra asa mifanaraka amin’ny tsena ary ny fanovana rafitra mba hampidi-bola ny kaominina bebe kokoa.
Manaraka izany, zava-dehibe aminy Tantine ny fanomezana rano fisotro madio ny mponina. Fokontany dimy no efa nahazo izany tombontsoa izany nandritra ny fitantanany ny kaominina. Mbola ezaka goavana anefa ny fanaparitahana ny tetikasa manerana ny fokontany rehetra ka tafiditra ao anatin’ny fandaharana asany izany.
Loha-laharana ny kandida laharana faha-03 ihany koa ny fanabeazana olom-pirenena, indrindra ny fampahafantarana ny zon’ny vehivavy, ny ankizy ary ny zon’olombelona. Navahiny manokana mihitsy aza fa ny herisetra mianjady amin’ny vehivavy sy ny ankizy no tena miteraka fahantrana na ara-batana izany na ara-tsaina na ara-bola,…
EPP enina miisa ambiny roa-polo no mila fanavaozana tanteraka ao amin’ity kaominina ity, efatra amin’ireo no efa vita ara-dalana. Mbola ezaka tsy maintsy ho tratrarina ny fanavaozana ny ambiny. Nohamafisiny fa « manana adidy sy andraikitra hitondra ny anjara birikiny amin’izany aho » fa indrindra ny fampandrosoana ny tanana amin’ny lafiny rehetra.
‹ Gender Links: La femme prend une place importante dans le développement	› Kandida kaominina Fiombonana sy Ankadimanga: Tara ny famapandrosoana.
juil 29, 2015	@ 00:55:23
Rakotomiarintsoa Nirina liked this on Facebook.
juil 29, 2015	@ 16:37:15